नेकपा एमाले यतिबेला संगठन सुदृढीकरण अभियान संचालन भव्यताका साथ संचालन भइहरेको छ । समाजवादिका केही नेताले एमाले कमजोर भएको अभिव्यक्ति दिइरहदा एमाले प्रती जनताको आकर्षण भने बढी रहेको देखिएको छ ।
मंगलबार नेकपा एमाले पनौती नगरपालिका वडा नं १० को वडा कमिटीद्वारा आयोजित पार्टी भव्य भेला सम्पन्न भएको छ । पार्टी प्रबेश , सदस्यता वितरण ,टोल कमिटी गठन तथा शुभकामना आदनप्रदान सहितको उक्त भेला कार्यक्रम नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटि सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य मा. रामहरी सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यता र नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य तथा पनौती नगरपालिका प्रमुख क. भिम न्यौपाने बिशिस्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
त्यस्तै अतिथिहरुमा नेकपा एमाले काभ्रेका नेता क. सुरेश हुमागाई, नेकपा एमाले काभ्रेका नेता क. प्रेम लामा, पनौती नगर कमिटी अध्यक्ष क. सहदेब थापा लागायत नेताहरुको उपस्थितमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता शोभा श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो ।
भेलाले मकैटार टोल कमिटी समेत गठन गरेको छ । भेलाले शोभा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ९ सदस्य टोल कमिटी गठन गरेको हो । साथै कार्यक्रममा राप्रपा र माओवादी पार्टी परित्याग गरि ३८ जना नेकपा एमाले प्रबेश गरेका छ्न । जसमा राप्रपाबाट स्थानीय चुनावमा वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका अम्रीत थापा समेत रहेका छन ।